ကျွန်မရဲ့သူ » Random of Nang Nyi
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ.. လောလောဆည်တော့ သူ ကျွန်မနဲ့ရှိနေသေးသည်.. ကျွန်မက သူ့အကြောင်းရေးနေသည်… ကျွန်မပျော်ရွှင်နေပါသည်.. Share Tweet Posted by NangNyi at 1:21 am
10 Responses to “ကျွန်မရဲ့သူ”
MANORHARY says:	February 13, 2009 at 5:46 am	ဒီကလေးမ စာရေးကောင်းပုံကတကယ်လေးလိုပဲ …..း)း)ဖတ်ရင်းတောင်မြင်ယောင်လာတယ်..
Reply	ဗီလိန် says:	February 13, 2009 at 8:41 am	အဲ နိပ်သဟ။
Reply	littlebrook says:	February 13, 2009 at 9:14 am	စိတ်ထားလေးလည်း ကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်လေးလည်းကောင်းတယ်ရေးတာလည်း မိုက်တယ်
Reply	မောင်မျိုး says:	February 13, 2009 at 9:40 am	ချစ်နိုင်သူတွေ ချစ်ကြပါ ချစ်ကြပါ မိုက်တယ် ဇတ်လမ်းလေးက အိပ်မက်ဆန်ဆန်လေး ကြည်နူစရာလေးမို့ နှစ်သက်စွာဖတ်သွားတယ် နန်းညီရဲ့သူက လွတ်လပ်ရေးဖခင်နဲ့ မွေးနေ့ နဲ့တူနေပါလား အဆင်ပြေကြပါစေ ။ကျေးဇူးကမ္ဘာလုံးလောက်တင်မယ်ဆိုလို့ မအားတဲ့ကြားက 9693 စီးပြီးရောက်လာခဲ့တယ် Happy Birthday ဟိုအစ်ကို ချစ်သူနဲ့ ပိုတိုးလို့ ချစ်နိုင်ပါစေ ။
Reply	sait phay yar says:	February 13, 2009 at 9:57 am	မွေးနေ့လေးမှာပျော်ရွင်ပါစေ သံယောဇဉ်အတိမ်အနက်တွေကို ရင်နဲ့ ခံစားတတ်တာကောင်းပါတယ်
Reply	ခေါင်ခေါင် says:	February 13, 2009 at 10:02 am	ညီ ရော..သူရော… အမြဲပျော်ရွှင် ကြ..ပါစေ…
Reply	mirror says:	February 13, 2009 at 2:14 pm	အရေးအသားကတော့ ရေလည်မိုက်ပါ၏။
Reply	Anonymous says:	February 13, 2009 at 3:45 pm	ချစ်သူတွေလားလို့ မေးရင် မဟုတ်ဘူးဟု ဖြေရလွယ်သလောက်.. ဒါဖြင့် မချစ်ကြဘူးလားလို့ မေးရင်တော့ အင်မတန်ဖြေရခက်မှာပါပဲ.. သူက ကျွန်မချစ်သူမဟုတ်ပါ.. သူငယ်ချင်းလည်း မဟုတ်ပါ.. အသိမိတ်ဆွေ..မောင်နှမ.. အဲဒါတွေလည်း တစ်ခုမှမဟုတ်ပါ.. သူက “သူ” ဖြစ်သည်.. ကျွန်မအတွက်တော့ အဲဒါကတင် အဓိပ္ပါယ်ပြည့်စုံနေပါပြီ.. ဖြစ်နိုင်မည်ဆိုလျှင် သူနဲ့ကမ္ဘာကို ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်မည့် ကြိုးလေးတစ်ကြိုးအဖြစ် ကျွန်မရပ်တည်ချင်ပါသည်..
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေ..လောလောဆည်တော့ သူ ကျွန်မနဲ့ရှိနေသေးသည်.. ကျွန်မက သူ့အကြောင်းရေးနေသည်… ကျွန်မပျော်ရွှင်နေပါသည်..
Reply	Too Mar (toomar@gmail.com) says:	February 13, 2009 at 3:47 pm	ကြယ်တွေစုံသလိုချစ်သူတွေစုံစည်းကြပါစေ…
Happy Birthday နော် ညီ့ ကြယ်ကလေးရေ…
Reply	ဖိုးဂျယ် says:	February 13, 2009 at 8:57 pm	ပျော်ရွှင်ပါစေ ဟေ့လူရေခင်ဗျားနေကောင်းတယ်ဟုတ်ခြေနေ?အရေးအသားလေးတွေ ကောင်းတယ်။တော်၏တော်၏